Ukunyuka nokuwa kweCommune eyaziwayo 1
Njengamanye amaninzi kwiindawo zehlabathi, eJamani, ulutsha olungama-60 lubonakala luyinzala yokuqala yezopolitiko. Kwabaninzi abasemagqabini abashiya, isizukulwana sabazali babo sasisisigxina kwaye siyalondoloza. Indlela yokuphila efana ne-Woodstock eyavela eU.SA yayiyinto ebalulekileyo kweli xesha. Kwakhona, kwiphablikhi yaseJamani yaseJamani, kwakukho ukuhamba ngokubanzi kwabafundi kunye nabafundi abancinci abazama ukuphula imithetho ye-so-called-establishment.
Olunye lwezilingo ezinkulu nolwaziwa kakhulu ngeli xesha liyi -Kommune 1 , iqela lokuqala loJamani elikhuthazayo kwezopolitiko.
Ingcamango yokuseka umasipala kunye nemiba yezopolitiko yaya kuqala ekupheleni kweminyaka yama-60 kunye ne-SDS, i-Sozialistischer Deutscher Studentenbund, inxaxheba yentlangano phakathi kwabafundi, kunye ne-"Munich Subversive Action," iqela elikhulu lama-activist. Baxubusha ngeendlela zokutshabalalisa inzondo eyakhiweyo. Kubo, uluntu lonke lwaseJamani lwalulondoloze kwaye lucacile. Iimbono zabo zazivame ukubonakala zinzulu kwaye zincinci, njengalowo zenzile malunga nomgaqo-dolophu. Kuba amalungu ale qela, intsapho yendalo yenyukliya yayiyimvelaphi ye-fascism kwaye, ngoko ke, kwafuneka ibhujiswe. Kwala mafutha asemshiya, intsapho yenyukliya ibonwa njengowona mncinci "iseli" karhulumente apho ukucinezelwa kunye neziko elivela khona.
Ngaphandle koko, ukuxhomekeka kwamadoda kunye nabasetyhini kwenye yezo ntsapho kuya kubathintela kokubili ukuhlakulela ngendlela efanelekileyo.
Ukuncitshiswa kwale ngqungquthela kwakukusekwa kwimizi apho wonke umntu eyanelisa kuphela iimfuno zakhe. Amalungu kufuneka abe nomdla kuzo kwaye aphile ngendlela abathanda ngayo ngaphandle kokucinezelwa.
Iqela lafumana indawo efanelekileyo yeprojekthi yabo: umlobi kaHans Markus Enzensberger eBerlin Friedenau. Akunabo bonke abo bancedayo ukuhlakulela imbono eqhutywe kuyo. Ngokomzekelo, uRudi Dutschke, omnye wabadlali ababesebenza eJamani eJamani, bakhetha ukuhlala kunye nentombi yakhe kunokuba baphile ngokwenene kwi-Kommune 1. Nangona Abacatshulwa abadumileyo abaye bavuma ukujoyina iprojekthi, amadoda namabhinqa asithoba kunye nomntwana omnye washukuthela apho ngo-1967.
Ukuzalisekisa iphupha labo lobomi ngaphandle kokubandlulula, baqala ngokuxoxisana zabo. Kungekudala, omnye wabo waba yinto enjengeenkokeli kunye noobukhokho kwaye wenza ukuba i-commune ivumele yonke into eya kuba yokhuseleko njengemali okanye ukutya. Kwakhona, imbono yobumfihlo kunye nepropati yachithwa kwimizi yabo. Wonke umntu unokuyenza nayiphi na into ayifunayo ngexesha elide kwenzekayo kwabanye. Ngaphandle kwayo yonke loo nto, iminyaka yokuqala yokuqala ye-Kommune 1 yayingumgaqo-nkqubo wezobupolitika kwaye idlulele. Amalungu ayo acwangcise kwaye enza izenzo ezininzi zezopolitiko kunye nezenzo zokucaphukisa ukwenzela ukulwa noluntu kunye nokusekwa. Ngokomzekelo, baceba ukuphonsa i-pie ne-pudding kwi-vice-president we-United States ngexesha lokutyelela eWest Berlin.
Kwakhona, baxabisa ukuhlaselwa kweBilgium, okwenza ukuba baqaphele kwaye baphinde bangene ngaphakathi kwi-Intelligence Agency.
Indlela yabo ekhethekileyo yobomi yayingeyona nje ingxabano phakathi kwe-conservatives kodwa nakwiqela lama-leftist. I-Kommune 1 yaziwa ngokukhawuleza ngenxa yezenzo zayo ezinokunyusa kunye nezobuchule kunye nendlela yokuphila. Kwakhona, amaninzi amaqela afika eKommune, esele yangena ngaphakathi kwiWest Berlin ezininzi. Ngokukhawuleza kwatshintshe i-dolophu ngokwalo kunye nendlela amalungu asebenzelana ngayo. Ngethuba behlala ehholo elityebileyo, ngokukhawuleza banciphisa izenzo zabo kwizinto zesini, iziyobisi, kunye nokuzimela. Ngokukodwa, uRainer Langhans waba udumo ngenxa yobudlelwane bakhe obuvulekile kunye no-Uschi Obermaier. (Jonga i-documentary malunga nabo).
Bobabini bathengisa amabali abo kunye neefoto kwiimidiya zaseJamani kwaye baba yi-iconic yothando lwamahhala. Nangona kunjalo, kwafuneka babone nendlela abahlala nabo ngayo ababenomdla ngakumbi kwi-heroin kunye nezinye iziyobisi. Kwakhona, ukuxabana phakathi kwamalungu kwacaca. Amanye amalungu atyunjwe ngaphandle komasipala. Ngenxa yokunciphisa indlela yokuphila, i-dolophu yayixhatshazwa ngabadlali beengcawa. Le yinye yezinyathelo ezininzi ezikhokelela ekupheleni kweli projekthi ngo-1969.
Ngaphandle kweengcamango ezinzulu kunye neendlela zokuziphatha, iKommune 1 isacetyiswa kwamanye amacandelo aseJamani. Umbono wenkululeko yamahhala kunye nendlela yokuphila yama-hippie evulekile iyakunomdla kubantu abaninzi. Kodwa emva kwayo yonke le minyaka, kubonakala ngathi ubukhulu becala bufike kwabaninzi ababengama-activist. URainer Langhans, i-hippie ye-iconic, yabonakala kwimiboniso yeTV "Ich bin ein Star - Holt mich hier rau s" ngo-2011. Noko ke, inkolelo yeCommune 1 namalungu ayo ehleli.
Okuthethwa YiBhayibhile Ngokuzila Ukutya
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Oasis
Indlela yokufaka ukuKhanya kweBrake kwi-2005 kuya ku-2009 Ford Mustang
Umlawuli usebenza njani? Isikhokelo soQaleli kuMlawuli weScuba